कहाँ के – Page2– Nepal Parikrama
नेपाल अब लोडसेडिङ मुक्त
काठमाडौं– नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले सोमबारदेखि देश लोडसेडिङमुक्त हुने घोषणा गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक तीन घण्टाका दरले गरिदै आएको विद्युत् आपूर्ति कटौति सोमबारदेखि अन्त्य गरिने भएकाले मुलुक लोडसेडिङमुक्त जानकारी दिनुभयो । देशभर केन्द्रीय प्रसारण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जा गरी ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिजुली पुगेको छ ।
काठमाडौं– सरकारले निर्माण गर्ने भनेका योजनाको कडाईका साथ अनुगमन हुन नसकदा कतिपय योजनाहरु अपुरा छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत देशका विशिष्ट व्यक्तिले शिलन्यास गरेका थुप्रै ठूला योजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न भएका छैनन् । यद्धपि सरकारले ठूला योजनाका सपना बाड्ने क्रम भने जारी नै छ । नयाा योजना थपिदै गए पनि पुराना योजना भने अलपत्र पर्ने गरेका छन् । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐति
प्रदेश ४ मा शुक्रबार २ पटक प्रदेश मन्त्रीपरिषद् विस्तार
कास्की– पर्यटकीय हिसाबले अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश ४ मा एकै दिन दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट शुक्रबार साँझ ६ बजे २ जना मन्त्रीले सपथ लिएका छन् । तनहुँबाट निर्वाचित हरिबहादुर चुमनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र गोरखाका लेखबहादुर थापाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रूपमा सपथ लिएका हुन् । चुमन माओवादी केन्द्रका तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज हुन् भने थापा माओव
पशुपतिमा गाजा बेच्ने पक्राउ
काठमाडौं– शिवजीको प्रसाद भन्दै पशुपतिमा गाँजा बेच्ने पक्राउ व्यक्तिहरूलाई प्रहरी परिषरले नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगरिय प्रहरी परिषरबाट खटिएको टोलीले शिवरात्रीको मौका पारि पुशपतिमा गाँजा बच्ने ४० जनालाई पक्राउ गरी गौशाला प्रहरी वृत्तमा राखिएको हो । महाशिब रात्रीपर्वलाई लक्षित गर्दै सादा पोसाकमा समेत प्रहरी खटिएका छन् ।
बुधवार दशैभर मौसम चिसो, केही दिनमै गर्मी शुरू हुने
काठमाडौं– केही दिनयता बनेको पानी पर्ने प्रणाली अर्थात पश्चिमी वायुले ल्याएको न्युनचापीय प्रणालीको कारण देशभरको मौसममा बदली भएको छ । मौसममा आएको बदलीसंगै बुधबार विहान काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका पश्चिमी भेगमा पानी परेको छ । पश्चिमी वायुको सक्रिय प्रभावका कारण पश्चिमी तराई तथा पहाडी भागमा वर्षा भएपनि हिमाली क्षेत्रमा भएको हिउँपातका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । मंगलबार साँझबाट देशको सुदुरपश्चिम क्ष
मनाङमा भारी हिमपात हुँदा १० पर्यटक सम्पर्क विहीन
मनाङ– मंगलबारदेखि हावाहुरी सहित परेको हिमपातले मनाङकबो जनजीवन कष्टकर बनेको छ । मनाङको नासोङ गाउँपालिका, दानाक्युदेखि माथिल्लो मनाङको नेस्याङ गाउँपालिका तथा नार्पु गाउँपालिकामा पूरै हिमपात भएको छ । हिमपातबाट टेलिफोन टावरहरु अवरुद्ध हुँदा १० पर्यटक समेत सम्पर्क्विहीन भएको जिल्ला प्रसासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । मङ्गलबार बेलुकी मात्र जिल्ला भित्रिएका तथा चामेबाट माथिल्लो मनाङ गएका १० जना बाह्य पर्य
काठमाडौंको सडक विस्तारको काम अझै अलपत्र
काठमाडौं– काठमाडौंमा सडक विस्तारको काम अझै अलपत्र छ । काडमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारको काम तत्कालीन नगर प्रमुख केशव स्थापीत्को पालामा सन् २००२ मा सुरु भएको थियो । त्यसवेला काठमाडौमा हुन लागेको ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनका लागि भन्दै स्थापीत्ले रातारात उपत्यकामा विदेशी पाहुना ओहोर दोहोर गर्ने सबै क्षेत्रको सडकमा डोजर लगाएका थिए । हालको माइतिघर मण्डला रहेको स्थानको सिंगो बस्ति सोही समयमा भत्काएर बगैचा
साली नदी मेलामा निक्कमा व्यवस्थापन, ट्राफिक प्रहरीको लापरवाहीका कारण घाइते हुँदै फर्किए श्रद्धालु
काठमाडौं– धार्मिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको साली नदिमा यतिबेला स्वाथानी मेला र महोत्सव चलिरहेको छ । स्वास्थानी ब्रत कथा आरम्भ भएसँगै साली नदिमा पछिल्ला केही बर्षहरू देखि मेला र महोत्सव नै हुने गरेको छ । देशका विभिन्न जिल्ला लगायत भारतबाट समेत यो समयमा यहाँ दर्शनका लागि श्रद्धालु आउने गरेका छन् । तर साली नदिमा दर्शनका लागि जाने यात्रुहरूको आवत जावत सहज छैन । स्वस्थानी ब्रत कथाको अवधिभर यहाँ दैन
प्रदेशसभा समानुपातिक सदस्यले निर्वाचन अयोगबाट प्रमाणपत्र पाए
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वा्चित सदस्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार एक समारोहमा आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. आयोधिप्रसाद यादवले प्रदेशसभा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचितहरूलाई प्रमाण दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गरी सम्पन्न भएको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा स
कस्तो सुरक्षा व्यवस्था ? गोल घरबाटै भागे कैदी
काठमाडौं–काठमाडौं उपत्यकामा भएका श्रृङखलाबद्ध लुटपाट तथा डकैती मुद्धामा जेल परेका रामेछापका टिका थापामगर बिहीबार राती गोलघरबाटै फरार भएका छन् । उनी कारागारबाट भागेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ । प्रहरीकै मिलेमतोमा कैदी भागेको हुनसक्ने भन्दै बिहीबार राती ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । २०७३ पुसमा कौशलटारस्थित बैंकबाट पैसा निकालेर गठ्ठ